The Ab Presents Nepal » एकै परिवारका ३ सहित १० को मृत्यु, ‘गाउँभर रुवाबासी शोकमा डुब्यो गाउँ हेर्नुहोस! RIP लेखेर सेयर गर्दिनु होला
एकै परिवारका ३ सहित १० को मृत्यु, ‘गाउँभर रुवाबासी शोकमा डुब्यो गाउँ हेर्नुहोस! RIP लेखेर सेयर गर्दिनु होला
बझाङको मष्टा गाउँपालिकामा जीप दुर्घटना परी १० जनाको मृत्यु भएपछि कोटदेवल गाउँ शोकमा डुबेको छ। सोमबार सो जिप दुर्घटनामा परी एकै परिवारका ३ सहित १० जनाको मृत्यु भएको छ। मष्टा गाउँपालिका-१ कोटदेवल गाउँका मात्र ७ जनाको मृत्यु भएको छ। यसले पूरै गाउँमा रुवाबासी रहेको स्थानीय भुपेन्द्र खड्काले बताएका छन्।सदरमुकाम चैनपुर नजिकै रहेको डुङ्रीबाट मष्टा गाउँपालिका जाँदै गरेको से १ ज १०७२ नम्बरको जिप मष्टा गाउँपालिका-१ डौठी भन्ने ठाँउमा दुर्घटना भएको थियो।
दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेमा मष्टा गाउँपालिका-१ का ४२ वर्षीय कलकबहादुर खड्का, उनका १७ वर्षीय छोरा सुनिल खड्का पनि रहेका छन्। यस्तै उनकी श्रीमती वर्ष ३८ की जुनधारा खड्काको पनि सोही दुर्घटनामा परी घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको छ। यसैगरी सोही वडाका २३ वर्षीय हिक्मत खड्का, सोही वडाकी वर्ष ४९ की धौली खड्का, वर्ष ६५ की जुना खड्का, वर्ष ९ की विपना खड्काको समेत मृत्यु भएको छ। यसैगरी ३० वर्षीय भक्त द्वाल, वर्ष २७ का लक्ष्मी द्वाल सोही वडाका वर्ष २३ का चालक सुरेन्द्र थापा रहेको प्रहरीले वडा प्रहरी कार्यालय चैनपुरका सइ माहानन्द जोशीले बताए।
दुर्घटनामा परी गम्भिर घाईते हुनेमा मष्टा गाउँपालिका-१ का वर्ष १४ की संगिता खड्का, वर्ष २८ का गोकुल शाही वर्ष २८ का जनक द्वाल, वर्ष २८ की अनिता द्वाल र वर्ष १० का गणेश खड्का रहेका छन्। कोटदेवलका मृत्यू भएका कलक खड्काको एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ। एकै गाउँका सात जनाको मृत्यू भएपछि कोटदेवल गाउँमा रुवाबासी चलेको छ। मृत्यु हुने खड्का जातका सबै कोटदेवल गाउँका रहेका छन् भने द्वाल जातका रनाडा गाउँका रहेको स्थानीय भुपेन्द्र खड्काले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘गाउँभर रुवाबासी छ, गाउँका सबै शोकमा छन्।’दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न सदरमुकाम आएका कोटदेवलका स्थानीयहरु मिलेर जिप रिर्जभ गरी गएका थिए। ‘सडक एकदमै उकालो भएको र गाडीमा लोड बढी भएका कारण पछाडि सरेर भिरमा खसेको हो,’ प्रहरीले बताएको छ। चालकले उकालोमा फोर ह्वील नहालेका कारण पनि जिप अनियन्त्रित भई खसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। घाईतेहरुको उद्धारका लागि सिम्रीक एयरको हेलिकोप्टर पुगेको थियो। सो हेलिकोप्टरबाट तीन जनालाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको छ। अन्य २ जनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
प्रकाशित मिति June 18, 2019